May 23, 2022 - Achawlaymyar
ခေါက်ဆွဲစက်ရုံ၌လူလိုကြောင်း ပြောကာ မိန်းမအလစ်တွင် ခယ်မကိုခေါ်၍ ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ကာ… See More. ..
May 23, 2022 by Achawlaymyar
ခေါက်ဆွဲစက်ရုံ၌လူလိုကြောင်း ပြောကာ မိန်းမအလစ်တွင် ခယ်မကိုခေါ်၍ ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ကာ… See more ကောလင်းမြို့တွင် ခေါက်ဆွဲ စက်ရုံ၌ လူလိုကြောင်း ပြော၍ ခယ်မကို ခေါ် ဆောင်သွားကာ သားမယား ပြု ကျင့်ခဲ့သူကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။ ယမန်နေ့ညနေ ၆ နာရီ ခွဲအချိန်တွင် ကောလင်းမြို့၊ မင်းတဲကြီးရပ်ကွက်နေ အသက် ၃၉ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီး နေအိမ်တွင်ရှိနေစဉ် ခေါက်ဆွဲစက်၌ နေထိုင်အလုပ်လုပ်နေသူ သမီးတစ်ဦး၏ ခင်ပွန်း ဖြိုးကိုကို(၂၄)နှစ် ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းတို့အလုပ်လုပ်နေသော ခေါက်ဆွဲစက်တွင် အလုပ်သမားလို၍ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် သမီးကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသဖြင့်သမီးငယ်ကို ထည့်ပေးလိုက်သည်။ ည ၉ နာရီအချိန်ခန့်တွင် သမီးငယ်ထံမှ ဖုန်းဝင်လာပြီး ဖြိုးကိုကိုက ဆိုင်ကယ်ဖြင့် … Read more
၉နှစ်သမီး ဆီးချို (၆၀၀) အထိတက်မှန်း သိလိုက်ရတဲ့မိခင်ရဲ့ အဖြစ်
၉နှစ်သမီး ဆီးချို၆၀၀အထိတက်မှန်း သိလိုက်ရတဲ့မိခင်အဖြစ်ကတော့ အတော်ရှော့ဖြစ်သွားမှာပဲ မိခင်ရဲ့ပိုစ့်မှာ ရေးထားတာက ကျောင်းကပြန်လာတဲ့ ၉နှစ်သမီး ပင်ပန်းနွမ်းလျပြီးအသက်ရှုဖို့အားမရှိသလိုဖြစ်နေလို့ နီးရာဆေး‌ခန်းပြေးပြတာ ဆေးခန်းက ကလေးအသက်ရှုတာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီး ဆေးပေး အခြေနေစောင့်ကြည့်ဖို့ အိမ်ပြန်လွတ်လိုက်ပါတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ ကလေးကိုကြည့်ရတာ အဆင်မပြေတော့လို့ အမေက နီးတဲ့ဆေးရုံပြေး အရေးပေါ်ခန်းဝင်ရသွေးစစ်တော့ ဆီးချို ၆၀၀တက်နေတာကြောင့် အဆုတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ပြီး အောက်စီဂျင်ပေးထားရပါတယ်။ ကလေးရှော့ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် တစ်ချိန်လုံး ဂရုစိုက်နေရတာပါ။ အဲဒီဆေးရုံကနေ နောက်ထပ်ဆေးရုံကိုပြောင်းပြီးကုသရပါတယ်။ဒါတောင် ဆီးချို ၂၉၅ ဖြစ်နေတုန်းပါ။ မိခင်က နှစ်ပါတ်အတွင်း ကလေးရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ၇ ကီလို ကျသွားတယ် အစားနည်းလာတယ် ရေခဏခဏသောက်ပြီး ဆီးသွားတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ မိခင်ကိုမေးထားတဲ့ ကွန်မန့်တွေထဲ ကလေးဘာကြောင့်ဆီးချိုဖြစ်ရတာလည်းဆိုတော့ bubble tea တွေ ကိုလာကိုလာအချိုရည်နဲ့ ရယ်ဒီမိတ်မုန့်ထုပ်တွေ စားရင်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ … Read more
၆၆ဝဝကျပ် ရင်းပြီး ဝယ်ခဲ့တဲ့ဘေထုပ်ကနေ ၆၄သိန်း၆သောင်းကျော် အမြတ်ရခဲ့တဲ့ ကံထူးတဲ့ဖြစ်ရပ်
Unicode ၆၆၀၀ကျပ် ရင်းပြီး ဝယ်ခဲ့တဲ့ဘေထုပ်ကနေ ၆၄သိန်း၆သောင်းကျော် အမြတ်ရခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ် ဘေထုပ်ရောင်းဝယ်ခြင်းကို နိုင်ငံခြားမှာတော့ thrift shopping လို့ခေါ်ပြီး အဝတ် အစား၊ အသုံးအဆောင်တွေကိုကျရင်တော့ vintage ပစ္စည်းတွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဘေထုပ်ဝတ်ခြင်းဟာ ရှက်စရာမကောင်းပါဘူး။ ဟောလိဝုဒ်စတားတွေမှာတောင်မှ vintageအဝတ်အစားအသုံးအဆောင်တွေကိုကြိုက် လွန်းလို့ တမင်ဈေးကြီးပေးဝယ်ကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ Thrift shopping လုပ်တဲ့အခါ နာမည်ကျော် ဇိမ်ခံတံဆိပ်တွေရဲ့ ရှေးတုန်းကထုတ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမူရင်းဆိုင်တွေမှာတောင်ပြန်ရဖို့မလွယ်ကူတဲ့ ပစ္စည်းဟောင်းတွေ၊ အကန့်အသတ်နဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ အသုံးအ ဆောင်တွေကို ရှာတွေ့နိုင်သလိုတန်ကြေးကြီးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ဈေးအရမ်းသက်သာစွာရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံအချို့မှာတော့ ဘေထုပ်တန်းဆိုတာ သပ်သပ်ရှိပြီးvintage ပစ္စည်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လူတွေမှတမင်အချိန်ပေးကာ သွားတတ်ကြပါတယ် ။ဘေထုပ်အကျီင်္တွေဝယ်တဲ့အခါ အိပ်ကပ်ထဲမှ ဒေါ်လာတွေပါလာတာမျိုး လက်ဝတ်ရတနာပါလာတာမျိုးတွေ ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အရင်ပိုင်ရှင်က မေ့ပြီးအိတ်ထဲထည့်မိတဲ့အခါ ပြန်ရောင်းတော့ … Read more
ငါးဖမ်းထွက်ရင်း ဧရာမပုလဲကြီးအား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော တံငါသည်၏ ဧရာမပုလဲကြီးတန်ဖိုးသည်seemore
ငါးဖမ်းထွက်ရင်း သန်း၁၀၀တန် ဧရာမပုလဲကြီးအား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော တံငါသည် ပုလဲလုံးလေးများကို ကမာကောင်များမှ ရရှိပြီး နားကပ် လက်စွပ် စသဖြင့် လက်ဝတ်လက်စားရတနာများတွင် ထည့်သွင်းပြုလုပ်ကြပြီး စျေးကွက်တွင်ရောင်းချကြသည်ကို မြင်တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ သို့ဖြစ်၍ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွင် နေထိုင်သော တံငါသည်အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုတွင် ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် ရှားပါးလှသည့် ဧရာမပုလဲကြီးအား တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တံငါသည်အမျိုးသားသည် Palawanကမ်းရိုးတန်းတွင် စားဝတ်နေရေးအတွက် ငါးဖမ်းထွက်ခဲ့ရာ မထင်မှတ်ပဲ ၇၅ပေါင်အလေးချိန်ရှိသော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသော ပုလဲလုံးကြီးအား တွေ့ရှိခဲ့၍ အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် တံငါသည်သည် ထိုပုလဲကိုတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း ရောင်းစားခြင်းမရှိပဲ မည်မျှတန်ဖိုးရှိသည်ကိုလည်း မသိရှိခဲ့ပ။နောက်ဆုံးတွင် အမျိုးသားသည် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀တန်ဖိုးရှိ ပုလဲကြီးအား နာမည်ကြီးပြတိုက်တစ်ခုတွင် သွားရောက်၍ သိမ်းဆည်းထားသည်ဟု သိရသည်။ Credit Zawgyi ငါးဖမ္းထြက္ရင္း သန္း၁၀၀တန္ ဧရာမပုလဲႀကီးအား … Read more
သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ပန်းလေးကတစ်ဆင့် သင်ဘယ်လောက်အတ္တကြီးလဲ ပြောပြမယ် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မချစ်ခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ချစ်တတ်အောင် ကြိုးစားရမယ်တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်…ကျွန်မတို့ဟာ သူတစ်ပါးကို မချစ်ခင် ကိုယ်ကိုယ်ကို အရင်ချစ်တတ်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်တာနဲ့ အတ္တကြီးတာက မတူပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် ပျော်ရွှင်ဖို့ ၊ အောင်မြင်ဖို့အတွက် သူတစ်ပါးကို စိတ်ဆင်းရဲ၊ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်အောင်လုပ်တာမျိုးကို အတ္တကြီးတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကတစ်ဆင့် သင်ဘယ်လောက် အတ္တကြီးလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာပါနော်…. နံပါတ် (၁) သင်ဟာ အတ္တမကြီးပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ သင်ဟာ သူတစ်ပါးကို နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးတတ်ပြီး သူတို့တွေရဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို လက်ခံပေးတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်ဟာ တဖက်သားရဲ့ခံစားချက်တွေကို ဂရုစိုက်ပေးတဲ့အပြင် သူတို့ရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်တွေကို နားထောင်ပေးတတ်ပြီး အကြံကောင်းတွေလည်း … Read more
မေပန်းချီ ရဲ့ လေးစားဖွယ် အလှူလေးပါ
(Zawgyiျဖင့္ ဖတ္ရန္) စားစရာမရိွလို႔ သားအရင္းဆီက အတိုးနဲ႔ေခ်းကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရတဲ့ အေမအို တစ္ၪီးအတြက္ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးသြားမယ္ဆိုတဲ့ ေမပန္းခ်ီ ပရိသတ္ႀကီးေရ သရုပ္ေဆာင္ ေမပန္းခ်ီကေတာ့ မိခင္ဆံုးရႈံးထားတဲ့သမီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူမရဲ့ရင္ထဲမွာ အေမအရြယ္ေတြ ဒုကၡေရာက္တာ ေတြ့ရင္ တတ္ႏိုင္သ၍ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးတတ္သူပါ။ သူမရဲ့မိခင္ရိွေနစဥ္ကလည္း ေမပန္းခ်ီဟာ ကိုယ္တိုင္ဝင္ေငြရွာၿပီး ကိုယ္တိုင္ ျပဳစုေပးခဲ့တဲ့ တာဝန္ေက်တဲ့ သမီးတစ္ၪီးျဖစ္ပါတယ္ မိခင္ႀကီးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ သံုးထပ္တိုက္အသစ္ေလးမွာ သူမရဲ့ မိခင္ႀကီး မေနသြားရတဲ့ အတြက္လည္း စိတ္ထိခိုက္ ေၾကကြဲကာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနခဲ့ ရတဲ့ သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ ယေန့မွာေတာ့ ေမပန္းခ်ီက သားအရင္းဆီက အတိုးနဲ႔ေခ်းယူစားေသာက္ေနရတဲ့ အေမတစ္ၪီးအေၾကာင္းကို အြန္လိုင္းမွာ ေတြ့ရိွသြားၿပီး ကူညီေပးခ်င္ တာေၾကာင့္ သြားေရာက္ ေတြ့ဆံုခဲ့စဥ္ အခုလိုပဲေျပာၾကား … Read more
ငွေစုခြင်းဖြင့် သူမရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက် ရလာတဲ့အကျိုးဆက်ကို အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ် Jalyn Navio အမည်ရှိအမျိုးသမီးဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ သူနာပြုဘွဲ့ရတစ်ဥဦးဖြစ်ပေမဲ့လည်း ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ အသိများမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်မြို့သို့ သွားပြီး အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Navio ဟာ တိုင်းတစ်ပါးနိုင်ငံရှိ သဘောကောင်းတဲ့အိမ်တစ်လုံးမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။Navio ဟာ သင်္ဘောသားတစ်ဦး နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပေမဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကအဆင်မပြေခဲ့တာကြောင့် အခုတော့ သူမဟာ ဟောင်ကောင်မှာ တစ်ကိုယ်တည်းနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။Navio ဟာ လစဉ်လတိုင်းသူမရဲ့အလုပ်မှ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၈၂၀၀ (၁၈သိန်း နီးပါး) ရရှိပါတယ်။ Navio ဟာ လစာထုတ်တိုင်း သူမရဲ့ငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖိလစ်ပိုင်ရှိ သူမရဲ့ဆွေမျိုးများထံသို့ပေးပို့ပြီး ကျန်ငွေများကို သူမရဲ့သူငယ်ချင်းများအား ဒကာခံခြင်း နှင့် ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းစတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ သူမဟာ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံမျိုးနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပေမယ့်လည်း သူမရဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရှာရတဲ့ငွေများကို ချွေတာဖို့လုံးဝမစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။Navio … Read more
စိတ်တွေတအားညစ်လာလို့ စိတ်ပြေလက်ပျောက် မြို့ပက်ဘတ်စ်ကားစီးခဲ့ရာမှ ယာဉ်မောင်းကောင်လေးဆီကနေ နွေးထွေးနှစ်သိမ့်မှုတွေရပြီး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာကိုပါ ခံလိုက်ရသော မိန်းကလေး..See more. ..
လူသားတို့သည် မိသားစုရေးဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်မပြေတာတွေကြုံရသည့်အခါ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကို မခံစားနိုင်သည့်ချိန်တွင် စိတ်ပြေလက်ပျောက် ဖြစ်စေဖို့ ခရီးထွက်ပစ်တာမျိုးတွေ ပြုလုပ်တတ်ကြသည်။ ယခုတွင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ Jilinမြို့တွင် နေထိုင်သော အသက်၂၅နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေပဲ အိမ်ကလူတွေနဲ့လည်း စိတ်ဖိစီးနေရကာ စိတ်တွေအရမ်းညစ်ခဲ့ရ၍ စိတ်ပြေပျောက်စေရန် မြို့ပက်ဘတ်စ်ကားတစ်စီးကို လိုက်စီးခဲ့သည်။ မိန်းကလေးသည် ကားစီးနေချိန်မှာ မျက်နှာလေးက ငြိုးနွမ်းနေပြီး သူများတွေကားပေါ်ဆင်းသွားသော်လည်း မဆင်းနိုင်သေးပဲ ဖြစ်နေရာ ယာဉ်မောင်းကောင်လေးမှ အကြောင်းစုံသိရှိပြီးနောက် နှစ်သိမ့်အားပေးခဲ့သည်။ သူတို့နှစ်ဦးသည် ထိုနေ့ကစပြီး အဆက်အသွယ်မပြတ်တော့ပဲနဲ့ ၂နှစ်အကြာလောက် ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြီးချိန်မှာတော့ ကောင်လေးသည် သူတို့စတွေ့ခဲ့သော ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ရောင်စုံပူဖောင်းလေးတွေ ချိတ်ဆွဲပြီးတော့ ခရီးသည်တွေအများကြီးရဲ့ရှေ့မှာ ချစ်သူမိန်းကလေးကို ဒူးထောက်ပြီးတော့ ရိုမက်တစ်ဆန်ဆန် လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့သည်။ Rain (For Ialinks) Unicode စိတ်တွေတအားညစ်လာလို့ စိတ်ပြေလက်ပျောက် မြို့ပက်ဘတ်စ်ကားစီးခဲ့ရာမှ … Read more
မိသားစုအားပြဿနာရှာတဲ့သားဖြစ်သူကို ဖခင်အရင်းကသည်းမခံနိုင်တော့သဖြင့်… See more
Zawgyi မိသားစုအားျပႆနာရွာတဲ့သားျဖစ္သူကို ဖခင္အရင္းကသည္းမခံနိုင္ေတာ့သျဖင့္… See more အလုပ္မလုပ္စားဘဲ မိသားစုအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပသနာရွာရန္ျပဳေနခဲ့သူ သားအရင္းကို ဖခင္ျဖစ္သူမွ ဒါးျဖင့္ ခုတ္သတ္ခဲ့မွု ဇင္းက်ိဳက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ယမန္ေန့ညေန ၆နာရီ ၄၀မိနစ္အခ်ိန္က ေပါင္ၿမိဳ့နယ္ ဇင္းက်ိဳက္ၿမိဳ့ ခေလာက္အင္းရပ္ကြက္ နယ္ေျမ၄ ေအာင္သစၥာလမ္းတြင္ ေနထိုင္ၿပီး လက္သမားလုပ္စားသူ ဦးေအာင္ထိန္ ဆိုသူမွ သားအရင္းျဖစ္သူ ရဲမင္းပိုင္(၂၅ ႏွစ္)အားဒါးျဖင့္ခုတ္သတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ဦးေအာင္ထိန္၏ေျပာျပခ်က္အရ သားျဖစ္သူသည္ မိသားစုထံ ျပသနာရွာၿပီးေငြမ်ားေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္မလုပ္စားဘဲယခုကဲ့သို့ မိသားစုအားဒုကၡေပးေန၍ ၎ေတာင္းသည့္ေငြအား မေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္းသည့္ေငြမေပးသျဖင့္ ေသဆုံးသူက ဖခင္ကို လက္သီးျဖင့္ထိုးခဲ့ရာ နထင္စပ္၌ဖူးေရာင္ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္းယခင္ကလည္း ယခုကဲ့သို့အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဳးလြန္ေနခဲ့ ေသာသားျဖစ္သူအား ဦးေအာင္ထိန္မွ ဒါးရွည္တစ္လက္ျဖင့္ခုတ္လိုက္ရာ ဦးေခါင္းႏွင္ပုခုံးတို့၌ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိၿပီး ေနအိမ္ေရွ႕လမ္းေပၚတြင္ ရဲမင္းပိုင္မွာ ေသဆုံးသြားခဲ့ သည္ ကိုေတြ႕ရသည္။အဆိုပါအမွုအား ဇင္းက်ိဳက္နယ္ေျမရဲစခန္းမွ … Read more
မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်…အဖိုးကိုချစ်လားဆိုပြီး (၅)နှစ်သမီးလေးကို အဖိုးအိုဖြစ်သူမှ…
မုန႔္ဝယ္ေကြၽးမယ္…အဖိုးကိုခ်စ္လားဆိုၿပီး (၅)ႏွစ္သမီးေလးကို အဖိုးအိုျဖစ္သူမွ… သံတြဲၿမိဳ႕၊ စာနီေတာင္တြင္ ေနထိုင္သူ အသက္(၆၁)ႏွစ္အ႐ြယ္ ဦးဟန္ေမာင္၊ အႏွိပ္သည္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ အသက္ေမြးသူ ခ်င္းလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာမွ အသက္ (၅)ႏွစ္အ႐ြယ္ မနဒီအား ယမန္ညေန ၅ နာရီခြဲ႕ခန႔္အခ်ိန္တြင္ မုဒိန္းက်င့္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ျဖစ္စဥ္မွာ အဆိုပါေန႔ရက္ အခ်ိန္တြင္ ဦးဟန္ေမာင္မွ မယြန္းနဒီအား မုန႔္ဝယ္ေကြၽးမယ္ အဖိုးကိုခ်စ္လားဟု ေမး၍ မုဒိန္းျပဳက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကေလးမေလးမွာ နာလြန္းေသာေၾကာင့္ ေအာ္ဟစ္ခဲ့သျဖင့္ အသံမထြက္ႏိုင္ရန္ ပါးစပ္ကိုပိတ္၍ လည္ပင္းကို ညႇစ္ထားခဲ့ရာမွ လက္လြန္ၿပီး ကေလးမွာ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ရာနံနက္ ၄ နာရီခန႔္အခ်ိန္တြင္ ေကြ႕ေခ်ာင္းေက်း႐ြာအနီး ေတာင္ကုတ္သံတြဲကားလမ္းေပၚ၌ စက္ဘီးစီးသြားေနစဥ္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ မုဒိန္းက်င့္မႈ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ မရွိကို ေဆးစစ္ခ်က္ အေျဖရလာဒ္ကို ေစာင့္ဆိုင္းလွ်က္ရွိသည္။ တရားခံကို သက္ဆိုင္ရာ … Read more